တံတားကလေး | YoeYar CG Blog
3 thoughts on “တံတားကလေး”
Lionslayer on January 22, 2010 at 9:43 pm said:
Voice starring: Me, Aunty Nge, Gugu, Pipi :)
johnmoeeain on January 23, 2010 at 11:52 am said:
တစ်ခါတစ်ခါ ကလေးတွေဆီက နမူနာလေးတွေက ပြန်လိုက်နာရတယ်နော်….
တံတားကလေး ကတော့ ပေးချင်တဲ့ အတွေးလေးကို ပုံဖော်သွားတာကောင်းတယ်နော်….
မြန်မာ့ အငွေ့အသက်လေးလည်း ပါဝင်အောင်ပေါ့…. GOOD!
Lionslayer on January 23, 2010 at 10:49 pm said:
Really :) ? Thanks.